हतियार बोकेर जंगे पिलर संगै उभिएको जिग्रिको तस्बिर भाइरल ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २९ कार्तिक शुक्रबार १५:५६
हतियार बोकेर जंगे पिलर संगै उभिएको जिग्रिको तस्बिर भाइरल !
हास्य कलाकार कुमार कटेल जिग्रिको एक तस्बिर सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । पिलर नम्बर १५३ / ०४ लेखिएको पि’लर संगै हतियार लिएर उभिएका जिग्रिको तस्बिर भाइरल भएको हो । श्रोतका अनुसार यो तस्बिर हास्य शृंखला सक्किगोनिको सुटिंगको लागी तयार पारिएको सेटमा खिचिएको बुझिएको छ । हरेक नागरिक बिना बर्दीको सिपाही हौ र यो मातृभूमिको सुरक्षा गर्नु हामी सबैको पहिलो कर्तब्य हो जय नेपाल लेख्दै जिग्रिले यो तस्बिर फेसबुकमा राखेका थिए ।
प्राप्त जानकारी अनुसार सक्किगोनिमा भारतीय सिमा अतिक्रमण कै बिषयलाई लिएर यो भाग तयार पारिएको छ । कुमार कट्टेलले यस अगी पनि भिभिन्न बिषयमा आफ्नो खरो टिप्पणी सार्बजनिक गर्दै आएका छन् । सीमा अतिक्रमण गरी भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा बनाएपछी अहिले देशभर यसको बिरोध भइरहेको छ । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मलाई भारतले समेटेर नक्सा बनाएपछी नेपाली नागरिकले विरोध गर्दै नक्सा सच्याउन माग गरेका छन् ।
PREVIOUS Previous post: कालापानीमा भएको जनगणनाको प्रमाण भेटियो
NEXT Next post: सिमा मिच्दा एउटा ट्वीट र प्रेस विज्ञप्तिमा स्पष्ट नाम लेख्न नसक्ने राष्ट्रभक्त हुन सक्दैनन् – आङकाजी शेर्पा